Ogaden News Agency (ONA) – Wareysi uu kaga xogwaramayo N/hure Axmad Sanweyne ciidankii WSLF uu ka midka ahaa iyo CWXO uu abaanduulaha ka yahay
Wareysi uu kaga xogwaramayo N/hure Axmad Sanweyne ciidankii WSLF uu ka midka ahaa iyo CWXO uu abaanduulaha ka yahay
Posted by ONA Admin	/ January 4, 2014
Waxaad wareysigii 1aad ku dhagaysateen warbixinadii asaaskii JWXO ee asaasaayaashii ururka ay ka warbixiyeen. Maanta waxaan idiinku haynaa halkan wareysi ay ICDS la yeelatay N/hure Axmad C/hi Cumar (Sanweyne) oo ah Abaanduulaha CWXO .
Naftii-hure Axmad wuxuu goobjoog ka ahaa kana qayb-qaatay halgankii WSLF, isagoo ka mid ahaa dhalinyardii ugu horeeyay ee loo tabarabay ee xabadii ugu horeysay ka riday dalka. Sidaad ku maqli doontaan wareysiga wuxuu N/hure Axmad sheegay inuusan jirin qof nool qarnigan oo aan dhalan iyadoo colaadi u dhexeyso shacabka S.Ogadenya iyo ciidamada Itobiya oo duulaan ah.
Arimaha taariikhiga ah uu sheegay waxaa ka mid ah in sharciga lagu xukumo Ogadenya ilaa waqtigan xaadirka ah uu dajiyay Minilik sharcigaasoo aan waxba laga badalin.
Q2aad ee wareysiga wuxuu kaga xogwaramayaa N/hure Axmad jabhadii WSLF iyo dagaaladii ay la galeen ciidankii Dargiga iyo guulihii ay ka gaadheen iyo asbaabihii keenay fashilaadii ku dhacday dagaalkii 1977kii isagoo barbardhigaya xaaladda halganka hadda ka socda Ogadenya ee JWXO ay hogaaminayso isagoo ah Abaanduulaha CWXO.
1. San-wayne one
2. San-wayne two